Dzimba dzoUmambo—Dzinovakirwei Uye Dzinovakwa Sei?
Nigeria, yekare uye itsva
Sezvinoratidzwa nezita rokuti Imba yoUmambo, zvinonyanya kudzidziswa ipapo kubva muBhaibheri ndezveUmambo hwaMwari—musoro weushumiri hwaJesu.—Ruka 8:1.
Inzvimbo dzokunamata kwechokwadi dziri munharaunda. PaDzimba dzoUmambo ndipo panorongwa basa rokuparidza mashoko akanaka oUmambo. (Mateu 24:14) Dzimba dzoUmambo dzakavakwa uye dzakakura zvakasiyana-siyana, asi dzose zvivako zvine mwero, dzakawanda dzacho dzichishandiswa neungano dzinopfuura imwe chete. Mumakore achangobva kupfuura, takavaka makumi ezviuru zveDzimba dzoUmambo itsva (avhareji yeshanu pazuva) kuitira ungano dzedu dziri kuramba dzichiwedzera. Izvi zvinokwanisika sei?—Mateu 19:26.
Dzinovakwa pachishandiswa mari inobva muhomwe imwe chete. Mipiro iyi inotumirwa kuhofisi yebazi kuitira kuti ungano dzigone kuwana mari kana dzichida kuvaka kana kuti kugadzirisa Imba yoUmambo.
Dzinovakwa nevazvipiri vasingabhadharwi vanobva mumamiriro ezvinhu akasiyana-siyana. Munyika dzakawanda, Mapoka Okuvaka Dzimba dzoUmambo akarongwa. Mapoka ehama nehanzvadzi anoshanda pakuvaka Dzimba dzoUmambo anobva pane imwe ungano achienda pane imwe munyika imwe chete, kunyange kuenda kunzvimbo dziri kwadzo dzoga, kuti vabatsire ungano kuvaka Dzimba dzoUmambo. Mune dzimwe nyika, Zvapupu zvinokwanisa zvakasarudzwa kuti zvitungamirire pakuvaka uye kugadzirisa Dzimba dzoUmambo dzinenge dziri munharaunda dzavanenge vanzi vashandire. Kunyange zvazvo vakawanda vane unyanzvi hwemabasa vachizvipira kushandisa uyanzvi hwavo panzvimbo imwe neimwe inenge ichivakwa, vakawanda vevanhu vanozvipira kuita basa vanobva muungano yacho. Mudzimu waJehovha uye kushanda nemweya wose kunoitwa nevanhu vake zviri kuita kuti zvose izvi zvikwanisike.—Pisarema 127:1; VaKorose 3:23.
Nei nzvimbo dzedu dzokunamatira dzichinzi Dzimba dzoUmambo?
Kuvaka Dzimba dzoUmambo mupasi rose kunokwanisika sei?
Wakamboshamisika here kuti chii chinoitwa pamisangano yedu? Hapana mubvunzo kuti uchafadzwa nemhando yedzidzo yeBhaibheri yaunogona kuwana ikoko.